Mediam-bahoaka · Oktobra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Oktobra, 2017
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Oktobra, 2017
Azia Atsinanana 31 Oktobra 2017
Ireo Sinoa mpanoratra bilaogy no nitari-dàlana tamin'ny fampiasàna ny fanamarihana ho fomba iray hiresahana ireo olana - indrindra ny ara-pôlitika. Raha mamoaka zavatra ao amin'ny bilaoginao momba ny fihenjanana eo amin'ny Sinoa-Japoney, na adihevitra momba ny tantara Sinoa-Japoney, sy ireo olana mifandraika amin’izany ianao, ampiasao ity fanamarihana ity: cn_jp_dialog.
Kiobà: Ireo Niharam-boina Noho i Irma tao An-tanànan'ireo Tafiodrivotra
Ao Camagüey, mandalo ireo tafiotra, ireo niharam-boina kosa mitoetra. Nomen'i Irma azy ireo taorian'ny tafiodrivotra izay namely azy ireo ny 29 aogositra 2017 ny kapoka farany.
Bilaogy Ho an'ny Fandriampahaleman'i Afovoany Atsinanana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Oktobra 2017
"Fanirianay ny hahalasa an’ity bilaogy ity ho toerana goavana tsidihan'ireo olona rehetra izay te hahalala ny tena zava-mitranga eo amin'ny tany Israeliana sy Palestiniana, ka hanomboka hamoaka vaovao lehibe eto izahay alohan'ny hamoahana azy ireo any amin'ny media", hoy i Daniel Lubetzky, mpanangana ny Bilaogy OneVoice.
Porofoin'ny tarehimarika fa raha toa ka mihamitombo ny tahan'isan'ny fifindràna sy fianahan'ny aretina hepatita, dia mihamiakatra ihany koa amin'ny ankapobeny ny isan'ireo mamoy ny ainy vokatry ny aretina VIH/SIDA
Fihaonamben'ny Global Voices Taona 2017: Isa Miverina Ho Any Sri Lanka!
Firenena manodidina ny 50 no ho voasolo tena amin'ny Fihaonamben'ny Global Voices 2017. Miaraha aminay avy any Colombo, Sri Lanka, ny 2-3 Desambra!
Tenirohy Maneso Ireo Fisehosehoana Eo Amin'ny Samy Bangladeshita
"Azonao atao ny mamindra elephanta/lalomena/tokatandroka amin'ny anjomaran'ny fiaranao, fa tsy izaho izany. #BangladeshitaAho"